China Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Gongming Automation Technology Co. , LTD
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးစက် > Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်
Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်
Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်သည် ultrasonic ဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၃-၇ မီလီမီတာအကျယ်ရှိ elastic ခါးပတ်ကိုတင်ရမည်။
Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်၏ကောင်းကျိုးများ -
1. တင်းကျပ်စွာစက်ဖွဲ့စည်းပုံ, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, အာကာသသိမ်းပိုက်မထားဘူး။
2. မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု, အနိမ့်အမှားများကို။
Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်သည် ultrasonic ဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၃-၇ မီလီမီတာအကျယ်ရှိ elastic ခါးပတ်ကိုတင်ရမည်။ ရွေ့လျားနေသောခါးပတ်ပေါ်တွင်မျက်နှာဖုံးကိုအလွတ်ထားရန်အော်ပရေတာ ၁ ခုသာလိုအပ်ပြီးမျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်ကိုစက်ဖြင့်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်သည်အဟောင်းပုံစံမျက်နှာဖုံးစက်၏အခြေခံတွင်ပိုမိုတည်ငြိမ်။ မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုရှိပြီးနားနားကွင်းအတွက်၎င်း၏အလှည့်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်၏ဖော်ပြချက်:
Hot Tags: Semi Ear Loop ဂဟေဆော်စက်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ ကြာရှည်ခံ၊ လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှု၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ တစ်နှစ်အာမခံ